Luttu_Wanna – The Art Garden Rohingya
Posts tagged "Luttu_Wanna"
မယုမြိုင် ရေးဖွဲ့သူ- လူထုဝဏ္ဏ (၁) ဟိမဝန္တာ့၊ တောင်ဆွယ်ချာ ညွှန့်ဖြာကြော့တည်၊ တောင်မြောက်သွယ် ပင်လယ်အော်ကမ်း၊ ရေသောက်အံ့ ကြွဖြန့်လာခဲ့၊ ဇွဲမာန်စွဲ အထွတ်ဖြိုင်ဖြိုင် မယုမြိုင်။ (၂) ဥယျာဉ်သဖွယ် ပန်းစုံလည် စံပယ်၊ ဇီဇဝါ၊ ထပ်တရာ ကလျာသဇင်၊ ချုံခိုဆင် သရဖီပျို၊ ပန်းခွာညို ပွင့်စိုဂနိုင်၊ တင့်မွှေးကြိုင်။ (၃) မယူရ၊ ကာယာပူရ ချစ်နှမ သည်စုံမြိုင်ထဲ စံပျော်သွား ဟာနီဘားဘုရင် နန်းစိုက်တင် ...
နှစ်ကူးချိန်ခါ ပျော်စရာလား ရေးဖွဲ့သူ- လူထုဝဏ္ဏ ပြက္ခဒိန် စာရွက် သစ်ရွက်ကြွေသလို ရွက်အိုစွန့်၍ နှစ်ညွန့်ချီလို့ သည်ခါသမယ ပျော်စရာဟု ကြွေးကြော်နေစဉ် ငါကားတုန်လှုပ်ပြီတကား။ ဓမ္မတာလောက ဘဝကြိုးတာ တိုတောင်းလာတဲ့ နှစ်ကူးချိန်ခါ တွေးတော့ဧကန် မျက်ရည်စမ်းစမ်း စဲခွင့်မဖန် ငါ့ခရီးလည်းနီးလာပြီလား။ (4-1-2020) The Art Garden Rohingya
May 08, 2019 AGR PROVERBS
Cuornír Háñt só, Baiggánír Ek só. A Rohingya Proverb အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် One pup ofatigress is better than seven piglets ofasow. မြန်မာဘာသာပြန် ကျားပေါက်တစ်ကောင်သည် ဝက်ပေါက် ခုနှစ်ကောင်ထက် မြတ်သည်။ ဆိုလိုရင်း ဤ ...
ချည့်နဲ့လာခဲ့ပြီ ရေးဖွဲ့သူ - လူထုဝဏ္ဏ အမုန်းစက်ဝန်းထဲ တလည်လည်နဲ့ ရန်ငြိုးနံ့ပုပ် ဝန်းကျင်စော်လို့ အကြောက်သရဲ ရက်စက်တစေ တစပြင်ခြောက်ဝယ် အနေကြာတော့ အမြင်ထိုင်းလို့ ကမ်းလည်းမှုန်ဝါး အတွေးအာရုံ လမ်းပျောက်ဝဲဝဲ စိတ်ဖြေသိမ့်ဖြစ် ကဗျာဖွဲ့လည်း ကင်္ကာဘဝ ဆိုးလွန်းတာမို့ ကဗျာဖွဲ့စွမ်းတောင် တစတစ ချည့်နဲ့လာခဲ့ပြီ။ [၂၅-၀၃-၂၀၁၉] The Art Garden Rohingya